mpahandro, Private Household Job Description / Fanendrena Ary Accountability Template – JobDescriptionSample.org
Home / Uncategorized / mpahandro, Private Household Job Description / Fanendrena Ary Accountability Template
mpahandro, Private Household Job Description / Fanendrena Ary Accountability Template
superadmin Jona 28, 2016 Uncategorized 1 Comment 339 Views
Fanafanana sy Air Conditioning Mechanics sy Installers Job Description / Anjara asa sy andraikitra Template
hametraka, orinasa, na hamerenana amin'ny laoniny rivotra sy ny hafanana-pana teknika ao amin'ny trano fonenana na ny andrim-panjakana izay ara-barotra.
Fix na manolo wiring, farantsa, na diso fitaovana.
Jereo herinaratra lalan'ny na tapatapany ho an'ny fitohizan'ny, nampiasa fitaovana fitsapana izay herinaratra.
Diniho sy fitsapana fomba hanamafy teknika manaiky amin'ny fepetra arahana sy ny safidy na hamantatra sy hamantatra malfunctions.
Fifandraisana ho an'ny tete azo na hoses tonon-taolana, na mandinika lakan-drano, mampihatra fanerena hanombana -ary- hafa.
mpiaro, hampivelarana, na hanatanteraka fisorohana na fitsipika fiarovana dingana, toy ny ohatra fanadiovana, hery-manasa vacuuming fitaovana, na, oiling singa, na fanovana filtration.
Lay-avy sy ny hery rohy wiring eo amin'ny fanitsiana sy ny fitaovana, araka-to wiring planina, elektrisianina mampiasa ny handtools.
Silaka na fandavahana lavaka eo amin'ny faritra, rindrina, na ny ambony ka hanorina fitaovana, hery mampiasa tsofa na drills.
kajy, ambany, tari-dresaka, na Flex hoses na sodina, fampiharana ny sodina fitteris fitaovana.
Mamorona teti-na any an-tendrombohitra, na rafitra ductwork faritra, mampiasa vy-miasa izay transportable fitaovana na fitaovana welding.
Programmable, hizaha toetra sy hametraka baikoina, na eo amin'ny raharaham-barotra Wireless thermostats na tokantrano trano mba hampihenana ny fampiasana herinaratra momba ny fiakaran'ny maripanan'ny na hihena.
Tendrombohitra dehumidifiers na mifandray vokatra toy ny ohatra solosaina tianao, momba ny toerana izay mitaky milamina, maina rivotra hanatanteraka Nahay.
Mount andriamby- converters, centrifugal chillers, na fitaovana mifandray amin'ny toe-javatra mahatahotra rivotra.
Hametraka na hanamboarana ny rafitra fanadiovana rivotra-, toy ny ohatra na ny taratra manimba filtration manokana (taratra manimba) jiro rafitra fanadiovana.
Radiatera miisa mitantam-tsehatra ho an'ny faritra toerana mitantana fiakaran'ny maripanan'ny ny ankohonany na ny raharaham-barotra-be.
Repair na fanohanana fiakaran'ny maripanan'ny, fitaovana fampangatsiahina ny rivotra, ary AC (HVAC) fitaovana mba hanatsarana ny fampisehoana, toy ny amin'ny alalan'ny fanovana filtration, manasa fantsona, na mampatanjaka tsy misy poizina refrigerants.
Ifanakalozy hevitra ny fiakaran'ny maripanan'ny na hihena fandaharana malfunctions mpampiasa hitokantokana manana olana na mba hanamarinana fa ho levona mandrakizay dia namboatra koa ny fanamboarana.
tendrombohitra, fandrindràna thermostats, na mifandray, humidistats, na timers.
Miaraha hafanana na ny rivotra-mpisoloky fitaovana ny solika, rano tanteraka ny hanangana orinasa.
Design specs mandinika fandaharana, na makersA A toro-hevitra mba hiantohana ny fametrahana ny lafin-javatra mety koa mba hahafantarana ny fanahafana ny hafanana na hihena vokatra singa.
Mitoera amin'ny politika, tena mety takiana, na ny madio fizotry ny atrikasa.
Lafin-javatra an-tendrombohitra mpanampy ohatra stokers, rivotra fantsona blowers flues, na hanamaivana na fampandrosoana valves, ny hafanana na ny mifofofofo sy fitaovana.
Firaketana an-tsoratra sy ny fanadihadiana mandeha, vatsy, olana, fahaizantsika, na ny toe-javatra hafahafa samy hafa amin'ny asa fangatahana.
Rafitra ara-dalàna fanitsiana mitantam ny nanolorana azy ho amin'ny dingana equilibrium orinasa.
Manaova, toerana, ary mampiditra mampivarahontsana na fitaovana fanafanana, nanenjika drafitra ny endri-javatra na ny orinasa.
An-tendrombohitra na tany indray selfcontained-source hafanana manosika na mifangaro tany na airsource hafanana manosika mba hampihenana karbaona mifantoka fandaniana herinaratra sy ny famokarana entona karbaona manamaivana.
Cover fantson-drano, padding amin'ny toerana mahazo mampiasa tariby na azo tsapain-tànana fatorana.
Job Actions Tsy maintsy
Fahazoanao ny hevitr'izay vakinao-fahalalana ahitana andinin-tsoratra sy andinin-tsoratra ao amin'ny taratasy asa izay mifandraika.
Active-mihaino-Manome ny saina manontolo izay olona milaza, mahazo fotoana ho anao ny mandre ny zavatra natao, mangataka fanontaniana raha ilaina, fa tsy amin'ny toe-javatra manapa-izay diso.
Soratra-raha ilaina, rehefa nanoratra ho an'ny zavatra ilain'ny soa aman-tsara ny tsena miteny.
Fifandraisana-miresaka amin'ny hafa ny zava-misy effortlessly manonona.
Maths-Mampiasa rafitrisa mba hamahana olana.
Mampiasa fomba-siansa sy ny mpitsabo fitsipika mba hanarenana ny olana.
Critical-misaina-Mampiasa fitsarana sy Fandresen-dahatra mba hamantarana ny fahaiza-manao sy ny kileman-toetra ny fomba, vokatra na Alternate fanafody ny olana.
Active-ny Fianarana-ny fahafantarana ny vokatry vaovao fanazavana ho an'ny ho avy vao haingana sy hamaha olana-fanapahan-kevitra sy ny.
Ny fianarana sy ny fomba-fifantenana mampiasa fanofanana / tetikady sy ny fampianarana teknika mifanentana amin'ny toe-javatra manokana, na fampianarana, rehefa mahafehy hevitra vaovao.
Fanaraha-maso-MonitoringPERDetermining fanatanterahana ny orinasa, olona hafa, na ny tenanao mba hiteraka enhancements na handray remedial hetsika.
Social fidirana-raha tsy mahalala ny othersA fanehoan-kevitra satria izy ireo ny antony sy ny fahazavan-mitondra tena.
Dexterity-Manova zavatra raha oharina amin'ny othersI fepetra.
Marketing-mahomby hafa mba hanova ny fitondran-tena, na ny lohany.
Fanelanelanana-Nahazo ny hafa miaraka sy miezaka ny hampihavana variances.
Fampianarana-Mampianatra ny hafa ny fomba tena hanaovana ny hetsika.
Service Orientation-tsara mitady fomba hanampiana olona mba.
Famahana olana Complex--mamaritra mandroso olana sy ny famerenana mifandray Info hanombanana sy hanana safidy sy ny fampiharana vahaolana.
Raharaham-barotra dia mitaky fikarohana-Fandalinana sy ny zavatra fepetra mba hanao ny famolavolana.
Injeniera Design fanaovana na miova fitaovana sy ny teknolojia mba hiasa mpanjifa takiana.
Gear Selection-hanapa-kevitra ny karazana fitaovana sy ny fitaovana nanana ilaina ny manao ny asa.
Andian-fametrahana fitaovana, modely, tariby, na ny fonosana hihaona ny fepetra takiana.
Programming-Manoratra momba ny fampiharana solosaina fonosana izay hafa.
Asa Tracking-Viewing kiboriny, Toetoetra, na samy hafa mba hahazoana antoka tondro misy manao amin'izao fotoana izao araka ny tokony ho fitaovana.
Ny asa sy ny tahony-Mpitantana asa ny vokatra na ny fandaharana.
Fitaovana Maintenance-manome mahazatra sy ny fikojakojana ny fitaovana, rehefa manapa-kevitra ary inona no karazana fiarovana dia takiana.
Fanamboarana-miasa Famantarana mahatonga ny olana sy mifidy izay lalana handeha momba izany.
Manamboatra-Famerenana rafitra na ny milina mampiasa ny fomba ilaina.
Quality-Control Evaluation-Nanao fanaovana fitiliana sy ny fanadihadiana ny vokatra, tolotra, na ny mba hijerena teknika na fahaiza-miasa mahomby tsara.
View sy ny Decisionmaking-kevitra sy ny fandinihana tombontsoa sy ny mampitaha tendrena ho lany ny dingana mba hahita ny tsara indrindra mifanaraka iray.
Systems Analysis-fanapahany hevitra ny karazana teknika dia tokony hiasa sy ny fomba fanatsarana ny toe-javatra, raharaham-barotra, ary koa ny toe-javatra hisy fiantraikany soa.
Fomba Evaluation-Ilana famantaranandro fomba na ny rafitra famantarana ny fampisehoana sy araka ny tanjona ny milina marina na ny fepetra ilaina mba hanatanjahana fampisehoana.
Time-Management-fitantanana ny vanim-potoana manokana miaraka amin'ny hafa’ fotoana iray.
Fitantanana ny Financial Resources-mamaritra ny fomba vola miditra dia mety ho vola fa ny asa vita, ary tamin'ny fanaovana kaonty for ireo sarany.
Asa ny Fidorohana Resources-Mandray sy mitandrina ny mety fampiasana ny fitaovana, trano, ary nanana fitaovana ilaina ny manao asa manokana.
Fitantanana ny Staff Resources-Nanondro olona satria, mahazo, ary mandrisika manatanteraka, famantarana ny tsara indrindra ho an'izany olona fibodoana.
Fepetra fanabeazana Experience fahaizana
Link ny Diploma (na fanampiny ROA-yr ambaratonga)
High School Diploma (na GED na High School Senior Equivalence Certificate)
Mihoatra ny 2 taona, manodidina ary anisan'izany ny efa-taona
Task Management Skills fahaizana
Zava-bita / andrana – 92.97%
fiaretana – 92.22%
Fiezahana – 93.38%
Laharana ho an'ny Hafa – 90.20%
Cultural toerany – 88.35%
Fahafehezan-tena – 93.17%
Customization / mivezivezy – 89.67%
azo itokisana – 94.77%
Fanentanana ny Detail – 95.98%
azo itokisana – 90.83%
famoronana – 93.22%
poto-fisainana – 95.82%